Inona no dikan'ny firavaka platinum ao Kambodza? - Fanadihadiana siantifika
Araka ny nomarihinay nandritra ny fianaranay dia tsy misy firavaka platinum tena izy any Kambodza. Ny olona Kambodziana dia mampiasa ny teny hoe "Platinum" na "Platine" diso mba hilazana firaka vy misy ampahefatry ny volamena.
Nividy firavaka platinina izahay tany amin'ny tanàna samihafa sy fivarotana isan-karazany mba hamaritana marina ny atao hoe ity metaly ity. Nihaino anay koa ny mpivarotra tsirairay mba hahatakatra ny fanazavany, ary eto ny vokatra azonay.
Ny tarehimarika omenay dia ahena ary ny fampahalalana dia marina kokoa araka izay azo atao. Na izany aza, ny valin'ny fanadihadiana nataontsika dia tsy voatery mifanaraka amin'ny valin'ny vokatry ny firavaka rehetra, fa mety misy ny fanilihana.
Inona no tena platinum?
Standart platinum (isa 3)
Platinum nomera 5 sy 7
Platinum nomera 10
Ny tombony sy ny fatiantoka ho an'ny mpanao firavaka
Tombony ho an'ny firavaka
Ny tombony sy ny tsy fatiantoka ho an'ny mpanjifa
Tombony ho an'ny mpanjifa
Ny tena platinina dia metaly marefo sy malaky ary marefo, volafotsy fotsy-volafotsy. Platinum dia malefaka kokoa noho ny volamena, volafotsy na varahina, noho izany no metaly masiaka indrindra amin'ny metaly madio, saingy mora malemy noho ny volamena.
Platinum dia singa simika simika misy ny marika Pt sy nomerao 78.
Hatramin'izao, mbola tsy nahita firavaka platinum tena izy izahay tao amin'ny fivarotana firavaka rehetra any Kambodza. Saingy tsy midika izany fa tsy afaka atao izany
Ny vahoaka Kambodziana dia mampiasa ny teny hoe "Fatra" fotsiny hiresahana momba ny volamena madio. Fa ny volamena madio kosa malefaka loatra amin'ny fampiharana firavaka.
Raha firavaka vita amin'ny firaka volamena mifangaro amin'ny metaly hafa, dia tsy heverina ho "Mirefy", fa "platinum".
Noone mahalala ny tena niandohan'ny fampiasana ny anarana hoe "Platine", fa heverinay fa izy io dia avy amin'ny teny frantsay hoe "Plaqué" na teny anglisy "Plated", izay midika fa rakotra vy tena sarobidy ny firavaka any Kambôdza. , raha misy metaly mora vidy ao anatiny. Heverinay fa niova ny dikany rehefa nandeha ny fotoana.
Raha ny marina, ny cambodians dia mampiasa ny anarana fiaviany frantsay hoe "Chromé" hiresaka firavaka nopetahany takelaka.
Raha mihaino ny fanazavana ny mpivarotra, ny platinina mahazatra dia platinum nomera 3. Heverina fa 3 / 10 volamena, na volamena 30 / 300 volamena, na volamena 1000 / XNUMX.
Raha ny marina, ny fitsapana rehetra nataontsika dia ambany noho ny volamena 30% amin'ireto firavaka ireto, araka ny hitanao eto ambany, ny salan'isa dia 25.73%. Ity dia mety miovaova isan-jatony eo anelanelan'ny fivarotana samihafa, ary matetika ireo isan-jato dia miovaova firavaka amin'ny fivarotana iray ihany.
Nosedraina tamin'ny: Fampivelarana angovo X-Ray Fahafoizan-tena (EDXRF)
Raha ampitahaintsika amin'ny fenitra iraisam-pirenena ireo isa ireo dia midika izany fa volamena 6K na volamena 250 / 1000
Ity kalitao vy ity dia tsy misy any amin'ny firenen-kafa, satria ny kely indrindra volamena ampiasaina amin'ny fenitra iraisam-pirenena dia 37.5% na 9K na 375 / 1000.
Mihaino ny fanazavana momba ireo mpivarotra:
Ny laharana Platinum 5 dia midika hoe 5 / 10 volamena, na 50%, na 500 / 1000.
Ny laharana Platinum 7 dia midika hoe 7 / 10 volamena, na 70%, na 700 / 1000.
Tsy mitovy kosa ny vokatr'izany
Ho an'ny isa 5, ny vokatra dia ambany noho ny tokony ho izy, fa azo ekena, na izany aza, ny fahasamihafana dia mazava ho an'ny isa 7.
Ny isan-jaton'ny volamena dia mitovy amin'ny isa 5 sy 7, fa ny lokon'ny metaly dia hafa. Eny tokoa, amin'ny fanovana ny haben'ny varahina, volafotsy ary zinc, ny lokon'ny metaly fiovana.
Ny demand dia ambany ho an'ny isa platinum 5 sy 7. Ny firavaka dia mahalana vao amidy toy ny vokatra manara-penitra ao Kambodza. Matetika indrindra ny manafatra azy io ka ny firavaka no mamaritra ny firavaka indrindra ho an'ny mpanjifa.
Ny laharana Platinum 10 dia volamena madio, satria heverina ho volamena 10 / 10, na volamena 100 / na 1000 / 1000 volamena.
Fa raha ny tena izy, ny platinum isa 10 dia tsy misy, satria amin'izany, ny volamena madio dia antsoina hoe "Meas".
Kambodza vs fenitra iraisam-pirenena
Raha ampitahaina amin'ny fenitra iraisam-pirenena, ny takelaka Kambojiana dia ampitahaina amin'ny volamena mena. Ny alika dia misy varahina be dia be. Izy io ihany koa no fomba mora indrindra hahazoana volamena, satria ny varahina dia mora vidy kokoa noho ny metaly hafa ampiasaina amin'ny alloy volamena.
Ny volamena mavo amin'ny fenitra iraisam-pirenena dia misy varahina iraisana saingy volafotsy kokoa noho ny volamena mena.
Volamena mavokely dia eo anelanelan'ny volamena mavo sy volamena mena, ka varahina betsaka kokoa noho ny volamena mavo izy io, fa kely varahina noho ny volamena mena.
Ity fampahalalana manaraka ity dia mety miovaova isaky ny mpivarotra iray.
Toa misy ireo mpakafy Kambodza sasany mahalala fa ny kalitaon'izy ireo dia tsy misy kalitao ary misy koa ny fenitra iraisam-pirenena.
Henonay ny momba ny "Meas Barang", "Meas Italia", "Platine 18" ..
Ireo anarana rehetra ireo dia mety manana dikany samihafa. Ary ny mpivarotra samy manana ny fanazavana hafa.
Ny "refy Barang" dia midika hoe volamena avy any ivelany
Ny "refesin'i Italia" dia midika hoe volamena italiana
"Platine 18" dia midika hoe volamena 18K
Saingy avy amin'ny zavatra henontsika, ireo anarana ireo indraindray dia mamaritra ny kalitaon'ny vy, indraindray ny kalitaon'ny asan'ny mpanao firavaka. Raha ny platinum isa 18 dia tsy misy dikany raha ampitahaina amin'ny isa hafa satria midika izany fa volamena madio 180%.
Varotra fanaovana firavaka volamena
Milamina ny rafitry ny banky ao Kambodza. Ny vahoaka Kambojiana dia nandany ny volany tamin'ny trano sy ny fampiasam-bola maharitra. Ary mividy firavaka ho fotoana fohy na antonony izy ireo mba hialana amin'ny volany tsy amin'antony.
Mazava ho azy, ny ankamaroan'ny olona dia tsy manana teti-bola hampiasana na inona na inona, fa raha vantany vao manana vola kely voatahiry izy ireo dia mividy fehezam-boninkazo, rojo na peratra.
Matetika, ny fianakaviana tsirairay dia miditra ao amin'ny fivarotana iray satria matoky ny tompony.
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatakatra izay novidiny nefa tsy miraharaha izany satria ny fampahalalana roa tadiavin'izy ireo dia:
Ohatrinona ny morontsiraka?
Ohatrinona ny mpividy no hividy ny firavaka rehefa mila vola izy ireo?
Amin'ny salanisa, ny firavaka dia mamerina ny firavaka platinum mahazatra ho an'ny 85% amin'ny vidiny tany am-boalohany. Mety hiova izany amin'ny fivarotana
Ny mpanjifa dia tsy maintsy averina ny firavaka miaraka amin'ny invoice mba hahazoan'ny vola avy hatrany amin'ny alàlan'ny vola.
Izy io dia fampiasam-bola tsara. Mora ny mahazo vola imbetsaka amin'ilay zavatra
Tsy mivadika ireo mpanjifa satria tsy mahazo mivarotra ny firavany any amin'ny magazay hafa any Kambodza
Mila vola be eny an-tànana hividianana ny firavaky ny mpanjifa. Mampidi-doza izy io ary mety mahasarika mpangalatra. Indrindra alohan'ny fialantsasatra, rehefa tonga miaraka amin'ny fotoana mitovy ny mpanjifa rehetra satria mila vola izy ireo hankanesana any amin'ny faritaniny.
Asa mafy sy isan'andro satria ny tompon'andraikitra dia tsy maintsy mitantana ny fivarotana irery. Tsy misy mpiasa mahafeno ny asany
Mora ny mahazo vola
Aza mila manam-pahaizana
Very ny vola ianao rehefa amidy izany
Raha very amin'ny invoice ianao, very ny zava-drehetra
Tsy afaka amidy aminao any amin'ny fivarotana hafa ianao
Mihazakazaka tsara ny zava-drehetra raha mbola misokatra ny magazay. Fa raha mikatona ilay fivarotana dia inona no hitranga manaraka?
Aiza hividianana takelaka Khmer?
Ho hitanao io na aiza na aiza, amin'ny tsena rehetra amin'ny tanàna rehetra any amin'ny fanjakan'ny Kambôdza.
Amidy Khmer platinum ve isika?
Indrisy fa tsia.
Izahay dia mivarotra vatosoa voajanahary sy metaly sarobidy voamarina amin'ny fenitra iraisam-pirenena ihany.
Manolo-kevitra ihany koa izahay ny hamolavola sy hanao ny firavakao manokana amin'ny metaly sarobidy ary amin'ny kalitao rehetra, anisan'izany ny tena Platinum.
Manantena izahay fa nahasoa anao ny fandinihanay.
Manantena ny hihaona aminao any amin'ny fivarotanay tsy ho ela.